Isikhathi sokufunda: 5 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 20/12/2019)
Vala emzini Aachen, Monschau has konke: ukubukwa olunothile, a emazombezombe, emfuleni, kanye castle ngokubabazekayo, romance. Yini elenza libe Amadolobha zothando ephelele Ukuze Vakashela EJalimane uya khona abathandi bemvelo izinto zokuzilibazisa kuyinto isixuku salo ka izintaba emagqumeni. Ngaphezu kwalokho, uma u vakashela ebusika, uyokwazi ukujabulela yayo bendabuko market Christmas.
Meissen lihlala phezu komfula Elbe, futhi kuyinto edolobheni endala zonke Saxony no-zothando City. Isigodi Elbe yilokhu lunikezwe Meissen ukunxusa romantic ezinjalo. Nokho, kukhona okuningi ukubona, ezifana uphahla yayo enhle ebomvu ukuthi kukhona okusikhumbuza ePrague. Ngaphezu kwalokho, abathandi bokwakha ungajabulela ukuhlola thempeli ngokubabazekayo Gothic nge castle ngekhulu le-16.
Heidelberg iyona uya khona ephelele uma ufuna ukuzizwa umoya Romanticism futhi ujabulele charm waleli dolobha. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukuhlola emanxiweni castle egqumeni futhi uthathe ukungcebeleka ngomfula Neckar nge omthandayo.
Uma uya ku-cruise emfuleni eJalimane, uqiniseke ukuthi ufaka phakathi Cochem njengenye izitobhi zakho. izivini and a breathtaking 11th century castle are the main features of this river town and a very romantic city.